MOOC Meeraheena waxay ku martiqaadaa ardayda inay ogaadaan ama dib u ogaadaan taariikhda juquraafi ee Dhulka ee nidaamka qorraxda. Hadafkeedu waa in la bixiyo xaalad faneedka aqoonta mawduuca, iyo in la muujiyo in haddii natiijooyin gaar ah la gaaro, su'aalaha heerka koowaad ayaa weli soo baxaya.
MOOC-dan waxa ay diiradda saari doontaa meesha uu meeraheena ku jiro nidaamka qorraxda. Waxa kale oo ay wax ka qaban doontaa xaaladaha hadda la door biday in lagu sharaxo samaynta meereheena in ka badan 4,5 bilyan oo sano ka hor.
Koorasku wuxuu markaa soo bandhigi doonaa dhulka juqraafiyeed kaas oo qaboojiyey tan iyo dhalashadiisa, taas oo ka dhigaysa meere weli firfircoon maanta, iyo sidoo kale markhaatiyaasha hawshan: dhulgariir, volcanism, laakiin sidoo kale goobta magnetic Earth.
Waxa kale oo ay ka hadli doontaa dhaqdhaqaaqa juquraafiga ee meeraheena, taas oo ka tarjumaysa ficilka xoogga badan ee sameeyay Dhulka sida aan u naqaanno.
Koorasku wuxuu ugu dambeyntii diiradda saari doonaa dhulka hoostiisa badda, iyo sagxada badda taas oo qarinaysa dhaqdhaqaaqa bayooloji ee aad hodanka u ah, taas oo su'aal ka keenaysa muuqaalka suurtagalka ah ee nolosha ee kilomitirka ugu horreeya ee dhulka adag.
meeraheena Diisambar 18, 2021Tranquillus
READ Xoojinta shaqada taleefanka: waa maxay halista dhabta ah ee loo shaqeeyaha?
horeJilida caafimaadka: adiga ayay kugu xidhan tahay!
socdaHordhac physics quantum - qaybta 1